Nakatona ny sinagoga farany niasan'ny renivohitra litoania taorian'ny fandrahonana neo-Nazis
Home » Vaovao momba ny zon'olombelona » Nakatona ny sinagoga farany niasan'ny renivohitra litoania taorian'ny fandrahonana neo-Nazis
Rehefa nahazo fandrahonana maro, LitoaniaNy vondrom-piarahamonina jiosy dia nanapa-kevitra ny hanidy mandritra ny fotoana tsy voafetra ny trano fiangonana tokana miasa ao an-drenivohitra Vilnius. Izany dia teo afovoan'ny adihevitra ampahibemaso nataon'ny vahoaka momba ny fiheveran'ny firenena ny mpiara-miasa Nazi.
Ivon-toerana jiosy sy ny Synagoga Choral manan-tantara ao Vilnius no hikatona mandritra ny “fotoana tsy voafaritra”, hoy ny Lithuanian Jewish Community (LJC) tamin'ny fanambarana tao amin'ny tranonkalany. Nanapakevitra izany taorian'ny nahazoan'ny LJC “antso an-tariby sy taratasy nandrahona tato ho ato.”
Ireo nasionalista sy singa elatra ankavanan'ny renivohitr'i Litoania dia tezitra noho ny fanesorana takela-pahatsiarovana ho mpiara-miasa nazia eo am-pidirana amin'ny Akademia Siansa Litoanianina. Tao anatin'ny hetsika sahala amin'izany ihany, ny kaominin'i Vilnius tamin'ny herinandro lasa dia nanome anarana ny arabe iray izay nomena anarana taorian'ny diplaomaty iray tamin'ny ady sy ny mpiara-dia amin'i Hitler.
Ny jiosy litoanianina dia niarahaba ny fanapahan-kevitra ho tara loatra - raha nandrahona ny hanao fihetsiketsehana manerana ny firenena kosa ny nasionalista.
Fanadihadiana: Ny ampahatelon'ny Amerikanina irery no matory tsara kokoa any amin'ny hotely
Jamaika mikaroka fifandraisana amin'ny rivotra bebe kokoa any Eropa aorian'ny Brexit